Tsy afa-po ny 13 mey Mitohy ny tolona..
Asa soa sy fampielezan-kevitra Miditra an-tsehatra i Josoa Ravalomanana
Sady manao fampielezan-kevitra no misolo tena ny rainy amina asa soa i Josoa Ravalomanana zanaka lahimatoan’ny kandida Marc Ravalomanana no manohy ny fampielezan-kevitra hampandaniana ny laharana 25.
Mpanohana an-dRajoelina Io fa manomboka mihetraketraka
Raikitra ny lohamboto sy bodongeron’ny MAPAR sy ny TGV, izay toa manamafy ny nambaran-dRajoelina hoe: “Isika efa zatra ady,
Fandresen’i Dada Fotoana sisa andrasana…
Ny faritanin’i Fianarantsoa no nanaovan’ny kandida faha-25 Marc Ravalomanana fampielezan-kevitra omaly dia tany Camp Robin, Mahazoarivo, Fandriana, Ambositra, Fianarantsoa Renivohitra,…
Depiote Jaovato sy ny vahoakan’Antalaha Hampandany an’i Dada amin’ny heriny rehetra
Mitohy hatrany ny fanambarana ataon’ny fikambanana, olon-tsotra, mpanao politika,… ny fanohanany ny kandida Marc Ravalomanana laharana faha-25.
Fisorohana ny vato maty Nanome toromarika ny CENI
Taorian`ny fahatongavan`ireo biletà tokana avy atsy Afrika Atsimo ny 07 desambra lasa teo dia efa tonga any amin`ireo distrika manerana ny nosy ireo fitaovanam rehetra ampiasaina amin`ny fifidianana ankoatr`ireo distrikan`i Morafenobe sy Maintirano izay tsy maintsy mandeha fiaramanidina.
Fampihavanam-pirenena « Mbola misy voataizan’ny kolontsaim-panjanahana eto. »
Ny CFM na ny komitin’ny fampihavanana malagasy moa izany izao no nampisahanin’ny fitondrana malagasyny fanaovana izay hampihavanana ny mpiray tanindrazana rehetra. Mahakasika izay dia isan’ny fanontaniana apetraky ny maro ny hoe fampihavanana tahaka ny ahoana moa ilay atao amin’ity fiarahamonina malagasy feno
Mpivarotra Tsena petite vitesse Misy misandoka ny safidin’izy ireo
Tsy nahafaly ireo mpivarotra maro etsy amin’ny Petite Vitesse ny fanambarana nataon’ny delege iray amina sektera iray ao amin’ity tsena ity afak’omaly nilaza fa manohana ny kandida laharana faha-13 izy rehetra.
Tsy maintsy ravana ao anatin’ny 7 andro nanomboka ny zoma takariva teo ny governemanta, araka ny didin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC.
Governemanta mahavita azy ary manana ny fahefana rehetra fa tsy halokalofan-dRajaonarimampianina no tokony hatsangana eo, ka ny tolona tsy maintsy mitohy, hoy ny eny amin’ny 13 mey. Ny depiote ho an’ny fanovana no manan-jo tanteraka amin’ity lalàna ity hanendry izay praiminisitra fa tsy ianao intsony, ary olona mendrika ny fanovana no tokony hapetraka eo, fa tsy olona tendritendrena fotsiny, hoy ny depiote Hanitra Razafimanantsoa. Raha ny lalàmpanorenana ao amin’ny andininy faha-54 dia ny vondrona maro an’isa ao amin’ny antenimiera nanomboka tany amin’ny firotsahan-kofidiana no manolotra ny praiminisitra, izany hoe tsy manan-kery ny maro anisan’ny HVM izay tsy nanana depiote na iray monja aza. Tsy nahafa-po ary tsy nahafaly ny didin’ny HCC, hoy izy. Raha zohiana ny resaka fahalaniana tamin’ny fifidianana, dia ireo 73 no maro an’isa, ary ny isan’ireo mitambatra dia manome ny maro an’isa, ka arakaraka ny isan’ireo ny fitsinjaran’ny toerana, hoy ny mpahay lalàna iray. Mety misy ampahany kely hahafahantsika manao zavatra sy manova ny fitantanana ny raharaham-panjakana fa amin’ny ankapobeny tsy namaly ny fitakiantsika teto amin’ny 13 mey iny didy iny. Ny zavatra nagatahantsika teny amin’ny HCC dia nazava tsara hoe “Miala Rajao amin’ny alalan’ny “déchéance”, hoy hatrany ity depiote ity. Ny zavatra nangatahana tany amin’ny HCC dia nazava tsara satria tsy tafapetraka tao anatin’ny fe-potoana nolazain’ny lalàmpanorenana ny filoha, noho izany manan-jo ny olona rehetra hitory azy na hanala azy amin’ny fahefana. Ny HCC dia niteny hoe azo raisina ny fitoriana, izay midika fa nitombina ny paikapaika rehetra ara-teknika. Tsy nahita didy tahaka ity aho, hoy ny mpisolovava sady depiote Hanitra Razafimanantsoa. Tsy mety io raha ny governemanta sy ny CENI no hanomana ny fifidianana, ary efa nangatahantsika teto foana ny hanalana io CENI io, mila ovaina haingana io, ka tsy ekentsika io didy io, hoy izy. Mametra-panontaniana ny solombavambahoaka lany tao amin'ny boriborintany voalohany hoe : iza no anaovana fifanarahana politika ? Tsy hanao fifanarahana amin'ireo isika hoy izy, fa miala Rajao. Tsy ny olona nifofo ny aintsika, tsy ny namono ny namantsika tamin'ny 21 aprily no hanaovana fifanarahana, hoy izy. Mitohy ny tolona, tsy mijanona raha tsy vita hatramin'ny farany ny tolontsika, hoy hatrany ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena Hanitra Razafimanantsoa. Nilaza moa ny depiote Tinoka Roberto, fa miboridana Rajao mianakavy satria nanapaka ny HCC fa foanana io governemantan-dahalo mpanao kolikoly io. Tsy mipetraka intsony ny fahefan-dRajaonarimampianina ka mametraha fialana amin’izay ialahy fa tsy misy ilàna an’ialahy intsony, hoy izy. Asakasakareo any amin’ny tafika mbola milela-paladia an’io olona io, fa izahay kosa dia ny vahoaka no lehibenay, hoy izy. Raha tsy miala eo handehanantsika any Iavoloha ve ? Raha izay no ilaina, ho tonga isika amin’ny angady sy ny harona, hoy ity depiote ity. Mitohy ny tolona !